Miriwo yakabikwa, chikafu chine hutano uye chakareruka. | Kicheni Mapepa
Tichagadzirira zvimwe miriwo yakabikwa, dhishi rine hutano, miriwo yakanaka kwazvo uye sekutanga kana kuperekedza idhiri rakakura.
Gadzirira miriwo yakabikwa yakapusa, yakapusa uye ine hutanoIsu tinotorawo mukana pazvinhu zvaro zvese zvinovaka muviri uye tinochengetedza rese rekunaka. Steam yekubika iri nyore uye hapana mafuta anowedzerwa, izvo zvinoita kuti miriwo ive nyore uye isina mafuta.
Kana tikagadzira miriwo yakati wandei, tinofanirwa kungwarira kuicheka kuita zvidimbu zvakafanana, sezvo mimwe ichatora nguva yakareba kupfuura dzimwe, dzimwe dzinotofanira kuiswa mumaminetsi mashoma kumberi kuti dzirambe dzakangofanana kana kungwarira kubvisa idzo dzakabikwa.
Chinhu chekutanga kugadzirira miriwo yakabikwa ichave yekuchenesa iwo miriwo. Isu tinosuka makarotsi, toadzimura nekuachekacheka kuita zvisine mafuta zvakanyanya sezvo zvakaoma, saka zviri nani kuti usave wakanyanya.
Isu tinocheka madiki madiki emabroccoli, kugeza pasi petap, kuisa parutivi.
Nekoliflower tinoita zvakafanana ne broccoli.
Isu tinosuka bhinzi yakasvibirira, kuisuka, kucheka kuita zvidimbu.
Tinogona kugeza zucchini uye kusiya ganda kana kurimenya, tinozvicheka kuita zvidimbu.
Kana uine steamer, tichaisa miriwo yese tobika.
Kana iwe usina steamer, tinotora casserole ndokuisa mvura shomana, isu tinosuma bhasiketi kuti ubike miriwo. Dengu nemuriwo hazvifanirwe kubata mvura. Iyo strainer ine tsoka imwe inoshandawo. Isu tinofukidza iyo casserole uye rega iyo ibike kusvikira miriwo yabikwa. Anenge maminetsi gumi nemashanu.
Tichaona kana paine zvakambobikwa uye tinozvibvisa.
Kamwe iyo miriwo iripo, tinoiendesa kune imwe mundiro uye tinoshumira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Miriwo yakabikwa
Hake stew ne mbatatisi uye leek